ခေတ်ဟောင်း Bohemian V-neck Bat Sleeve Tassel Maxi Dress | ဝယ်ပါ။ WoopShop®
ရုပ်ပုံ / S အဖြစ်ရုပ်ပုံ / M ကအဖြစ်ရုပ်ပုံ / L ကိုအဖြစ်အနီရောင် / S ကအနီရောင် / M ကအနီရောင် / L ကိုအပြာ / S ကအပြာ / M ကအပြာ / L ကို
ခေတ်ဟောင်း Bohemian V-neck Bat Sleeve Tassel Maxi Dress - ပုံ / S backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်း: Cotton၊ Rayon
အရွယ် အရှည် သေတ္တာ ခါး နေအိမ်
စင်တီမီတာ | လက်မ စင်တီမီတာ | လက်မ စင်တီမီတာ | လက်မ စင်တီမီတာ | လက်မ
မှတ်ချက်- အရွယ်အစားသည် AU၊ EU၊ နှင့် US အရွယ်အစားများထက် သေးငယ်သည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ပုံမှန်ထက် ပိုကြီးသော အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ပါ။ အဝတ်လျှော်စက်ဖြင့် အဝတ်လျှော်ရန် ရေအေးကို အသုံးပြုပါ။ လက်ဖြင့်တိုင်းတာခြင်းအတွက် အမှားအယွင်းအပိုင်းအခြားအဖြစ် +-3cm ကို ခွင့်ပြုပါ။
61 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ကွဲပြားသော ဓာတ်ပုံကို တွေ့သော်လည်း နှစ်သက်သည်။ မငယ်ပါဘူး! p ကိုသုံးပါ m က သေးသေးလေးဖြစ်မှာကြောက်ပေမယ့် ap ကတော့ ငြိမ်နေမှာပါ။